Taunggyi Time (တောင်ကြီးတိုင်းမ်): June 2009
June 29, 2009 (DVB)–Russian and Italian engineering companies are reported to be involved in the development ofahuge iron ore mine in Burma’s eastern Shan state that campaigners say could displace more than 7,000 homes.
The already volatile Shan state is home to Burma’s second largest iron ore deposit, on the site of Mount Pinpet.
“Fifty people have already been forced to move and were not adequately compensated,” said the Robbing the Future report.
“The confiscation of vital farmlands has begun, leaving over 100 families without the primary source of their livelihood and sustenance.”
“[The government] don’t talk to the villagers, they don’t negotiate with the villagers regarding plans for the mining project - they don’t really discuss in advance what they are going to do,” said Khun Ko Wein.
Russia maintains strong ties with Burma despite the country’s ruling junta being under mounting international pressure over the trial of Aung San Suu Kyi and documented state-sanctioned human rights abuses.
An Italian company, Danieli, which claims to be one of the world’s leading suppliers of equipment to the metals industry, is also highlighted in the report.
Another concern of PYO’s is the link between the Pinpet mine and rumours that Burma is mining uranium,akey ingredient for nuclear weaponry.
According to the report, Burma’s Ministry of Energy has officially announced the presence of five uranium deposits in the country, although has not publicly stated that these will be mined.
ပင်းပက်တောင်စီမံကိန်း ယူရေနီယံ တူးဖေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိ PYO report တွင်ဆို
ပင်းပက်တောင် စီမံကိန်း ယူရေနီယံတူးဖေါ်နိုင်ဖွယ်ရှိ PYO အစီရင်ခံစာမှ ပြောဆို
ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နားက ပင်းပက်တောင်စီမံကိန်းတွေမှာ ယူရေနီယံတူးဖေါ်မယ် အစီစဉ်တွေလည်းပါနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲ့က ဒီကနေ့ ချင်းမိုင်မှာ ပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်၊ VOA ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က အပြည်စုံကိုတင်ပြပေးထားပါတယ်၊
ဟုတ်ကဲ့ပါ၊ တောင်ကြီးမြို့ အနားက ပင်းပက်တောင် သံသတ်တုရိုင်းတူးဖေါ်ရေး စီမံကိန်းထဲမှာ ယူရေနီယံတူးဖေါ်မယ့်အစီစဉ်လည်းပါဝင်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ အဲဒီဒေသမှာ ၃)နှစ်ကျော်ကြာ အချက်လက်ရယူစုဆောင်းခဲ့တဲ့ ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲ့က ပြောဆိုလိုက် ပါတယ်၊
ပင်းပက်တောင်အနီးတ၀ိုက် ဟိုပုန်းလွင်ပြင်ဒေသက စီမံကိန်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကို သုတေသန ပြုလုပ်ထားတဲ့ ” အနာဂတ်ကို လုယူဖျက် ဆီးခြင်း”လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲမှာ ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်၊
ကွင်းဆင်းသုတေသနလုပ်ခဲ့တဲ့ ပအိုဝ်းလူငယ် ခွန်ချန်းကီးက ဒေသခံတွေက ယူရေနီယံ စီမံကိန်းအပေါ် စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်နေကြတယ်လို့ခုလိုပြောပါတယ်၊
” ပင်းပက်သံရည်ကြိူစက်ရုံ စီမံကိန်းဝင်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ အဲဒီမှာတာဝန်ကျ နေတဲ့ စစ်အရာရှိတချို့နဲ့ အရပ်သားအရာရှိတချို့က အရမ်းခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ ကျေးရွာသားအချို့ကို ဒီနေရာမှာ ယူရေနီယံတူဖေါ်ဖို့ကိစလည်းပါဝင်နေတယ်ပေါ့ အဲလိုမျိုးပြောပြတော့ ရွာသားတွေကနည်းနည်းစိုးရိမ်လာတယ်၊ နောက် သတ်တုတွင်း တည်ဆောက်ဆဲ ၂၀၀၇)မှာ ရုရှားအစိုးရက ဓါတ်ပေါင်းဖိုတည်ဆောက်ဖို့ကူညီမယ် လို့ထပ်ကြေငြာတော့ သူတို့ပိုပြီးစိုးရိမ်လာတယ်၊ လာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အဲဒီနေရာမှာ ရုရှားတွေကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုထားဖြစ်ပါတယ်၊”
လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ စက်ရုံအခြေနေကို သူက ခုလိုပြောပြပါတယ်၊
” စက်ရုံကိုကာထားတဲ့ပုံကျတော့ ဆယ်ပေမြင့်တဲ့ အုတ်တံတိုင်း ၂)ထပ်တည် ဆောက်ထားတယ်၊ အုတ်တံတိုင်း တစ်ထပ်နဲ့တစ်ထပ်ကြားမှာ ကိုက် ၅၀)လောက်ခြား ထားတယ်၊ အဲဒီမှာလုံခြုံရေးအပြည်ချထားတယ်၊ အ၀င်ထွက်မှာပေါ့နော်၊ အဲဒီမှာ ရုရှားပညာရှင်လေးယောက်လည်း အချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေတယ်၊ ဒီစစ်တပ်တွေလည်း အခြေနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အချိန်တို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်လာတဲ့အချိန်တို့ဆို လုံခြုံရေးတွေအကြီးကျယ်ချထားတာရှိတယ်”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ညူကလီးယားသုတေသနအစီစဉ်တွေကို ၁၉၅၆)ခုအစောပိုင်းကာလ တွေကတည်းကစတင်ခဲ့ပါတယ်၊ အဲဒီချိန်ကတည်းက ဂျာမန်၊ ရုရှားပညာရှင်တွေဟာ ပင်းပက်တောင်တ၀ိုက်ကို ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွေရှိခဲ့လို့ ပအိုဝ်းလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ အစီရင်ခံ စာမှာဖေါ်ပြထားပါတယ်၊
ပင်းပက်တောင်တ၀ိုက်ကို ခုလိုကွင်းဆင်းလေ့လာမှုတွေကြောင့်ပဲ ယူရေနီယံတူးဖေါ်နိုင် တယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပိုမိုသံသယရှိနေတယ်လို့ ခွန်ချန်းကီးကပြောပါတယ်၊
” ကျနော်တို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်အရ အဲဒီယူရေနီယံတူးဖေါ်မယ့်နေရာကျတော့ သူတို့နေရာအတိကျပြောတယ်၊ အဲဒီတောင်မှာ၊ အဲဒီတောင်ရဲ့ ဒေသခံအခေါ် ကောင်တီမှာ ယူရေနီယံသိုက်ရှိတယ်လို့သူတို့ပြောထားတာရှိတယ်၊ အဲဒါကတော့ အရာရှိဆီကတဆင့် သူတို့ကြားရတာပေါ့နော်၊ နောက်ပြီး ၁၉၇၉)ခုနှစ်က ပညာရှင်တွေလာသွားတယ်၊ သူတို့လာတုံးက လမ်းတွေမသိတော့ ရွာသားတွေဦးဆောင်ပြီး အဲဒီနေရာကိုသွားရတယ်၊ အဲဒီချိန်မှာ ရွာသားတွေက ပိုပြီး လက်ရှိစက်ရုံမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ ၀န်ထမ်းတချို့ပြောတာနဲ့ အရင်က သူတို့ဦးဆောင်ပြီးသွားခဲ့တဲ့နေရာက ကွက်တိဖြစ်နေတော့ သံသယ၀င် တယ်ပေါ့နော်၊ အဲဒီနေရာကို”
တည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေစတင်လာခဲ့တဲ့ ၂၀၀၆)နှစ်ဦးပိုင်းကနေစပြီး ပင်းပက် တောင်ခြေအနီးတ၀ိုက်က ဒေသခံတွေကို အတင်းအကျပ်ရွေ့ပြောင်းနေရာချထားမှု တွေစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၊ အကယ်လို့တူးဖေါ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်လာတယ်ဆို ရင် တော့ တောင်ခြေအနီးတ၀ိုက် ကျေးရွာ ၁၄)ရွာဟာ အပြီးအပိုင်ပြောင်းရွေ့ခံရမယ့် အနေထားရှိတယ်လို့လည်း ပအိုဝ်းလူငယ်တွေရဲ့အစီရင်ခံစာက ဆိုပါတယ်၊ စစ်အစိုးရ ကတော့ မကွေး၊ တောင်တွင်းကြီး၊ မိုးကုတ်၊ ကျောက်ဆည်နဲ့ ဖေါင်းပြင်မြို့နယ်တွေမှာပဲ ယူရေနီယံတူးဖေါ်လို့ရနိုင်တယ်လို့ တရားဝင်ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုထားပါတယ်၊ ၂၀၀၇)ခုမေလ တုံး သိပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဦးသောင်းဟာ ၁၀)မီဂ်ါဝပ်ရှိတဲ့ ရေပေါသုံး ညူကလီးယား ဓါတ်ပေါင်းဖိုတခုတည်ဆောက်ဖို့ ရုရှားနဲ့သဘောတူ လက်မှတ်ထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ၊
အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်ဆီးခြင်း အစီရင်ခံစာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ရုရှား လျှို့ဝှက်သတ္တုတွင်း စီမံကိန်းကြောင့် လူဦးရေ ၇,၀၀၀ ခန့်
ကျေးရွာလူထုများက ရုရှား-မြန်မာ ပူးတွဲ အဏုမြူစီမံကိန်းဟု သံသယရှိနေခြင်း
ပြည်တွင်းစစ်မီးကြောင့် အတိဒုက္ခခံစားနေရသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ တောင်ကြီးမြို့အနီး တွင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် တည်ဆောက်နေသော သတ္တုတွင်းတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းက တောင်တခုလုံးကို တူးဖော် ထုတ်လုပ်ရန် အစီအစဉ်ရှိနေပြီး၊ ထိုဒေသနေ ကျေးရွာလူထု ၇,၀၀၀ ကျော်၏ အိုးအိမ်များ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးစေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုမျှသာမက အခြားလူထု ၃၅,၀၀၀ ကိုလည်း ထိခိုက် နစ်နာဖွယ် ရှိနေကြောင်း ယနေ့ထုတ်ပြန်သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
"အနာဂတ်ကို လုယူဖျက်ဆီးခြင်း" အမည်ရှိ ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်းအရုံး (PYO) ၏ အထူးသုတေသနပြု လေ့လာ ချက်နှင့် ရရှိလာသော ဓါတ်ပုံများကို အခြေပြုဖော်ပြထားသော ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယ အကြီးဆုံး သံရိုင်းသိုက်ကြီးကို မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် ရုရှားနိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် (Tyazhpromexport) တို့က တူးဖော်ရန် ပြင်ဆင်နေကြပုံကို အသေးစိတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
တည်ဆောက်နေဆဲ သံရည်ကြိုစက်ရုံသည် မြန်မာစစ်တပ်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ၁၀ ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးခန့်တွင် တည်ရှိပြီး၊ ယခုနှစ်အကုန်တွင် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြီးစီးမည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ဤဒေသတွင် မကြာသေးမီကမှ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည်မီးတောက်လာသည့် နေရာဒေသလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစက်ရုံတွင်လည်း မြေအောက်ဥမင်များ တည်ရှိနေပြီး၊ ၁၀ ပေကျော် အုတ်နံရံ ၂-ထပ်နှင့် သံဆူးကြိုး တစ်ထပ် ဖြင့် ကာရံထားပါသည်။
စက်ရုံသွားရာလမ်း ဖောက်လုပ်ရန် ရွာ ၃-ရွာမှ လူထု ၅၅ ဦးကို ၎င်းတို့အိုးအိမ်များမှ အတင်းအကျပ် ဖယ်ရှား ပြောင်းရွှေ့စေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပြီး၊ ဒေသအာဏာပိုင်များက စိုက်ပျိုးမြေ ၁၁,၀၀၀ ဧကကိုလည်း သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုများမှ ဒေသခံအာဏာပိုင်များထံ တင်ပြတောင်းဆိုမှုများကိုလည်း လျစ်လျူရှုထားခဲ့ပါသည်။
အပွင့်သတ္တုတွင်းတူးဖော်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်မှုများ စတင်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ဤသတ္တုတွင်း တူးဖော်မှုများ စတင်ပါက ၎င်းတောင်တခုလုံးကို အစစဖြိုဖျက်ပစ်ကြမည် ဖြစ်ပြီး၊ တောင်ခြေတ၀ိုက်ရှိ လူထု ၇,၀၀၀ ကျော်သည် လည်း ထိခိုက်နစ်နာရဖွယ် ရှိနေပါသည်။
သတ္တုတွင်း တူးဖော်မှုကြောင့် မြေတိုက်စားမှုများ၊ အနယ်အနှစ်များကို စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် ဤလွင်ပြင်ရှိ ပင်မ ရေ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည့် သဘက်ချောင်းသည်လည်း ညစ်ထေးရဖွယ် ရှိနေရာ၊ မြစ်ကြောင်းတလျောက်နေ လူပေါင်း ၃၅,၀၀၀ တို့လည်း ထိခိုက်နစ်နာရဖွယ် ရှိပါသည်။ ချောင်းရေကို စက်ရုံအတွက် သွယ်ယူအသုံးပြုနေသော ကြောင့်လည်း ယခုနှစ်တွင်ပင် ရေလျော့နည်းနိမ့်ကျလာနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ခရီးသွားလာခွင့် အတင်းအကျပ် ကန့်သတ်နေခြင်း၊ ၎င်းစီမံချက်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်မှု မရှိခြင်း ကြောင့် ဒေသခံများက အဏုမြူစီမံကိန်းများနှင့် ယခုသတ္တုတွင်းတူးဖော်မှု ဆက်စပ်နေမည်လောဟု သံသယရှိ နေကြပါသည်။
"သူတို့က နံရံတွေ၊ အတားအဆီးတွေနောက်မှာ သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ လျှို့ဝှက်ထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုစီမံကိန်းကြောင့် နစ်နာရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့က ရှေ့ဆုံးက နစ်နာကြရလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်မှာ တရားဥပဒေမရှိတာကို နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေက အခွင့်ကောင်းယူပြီး၊ ကျနော်တို့ သယံဇာတတွေကို လာအမြတ် ထုတ်ယူနေကြတယ်။ ကျနော်တို့ အနာဂတ်ကို လာပြီး လုယက်ဖျက်ဆီးနေကြတယ်" ဟု ပအိုဝ်းလူငယ်အစည်း အရုံး မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ခွန်ချန်ကီက ပြောပါသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ အဏုမြူစွမ်းအင်အေဂျင်စီက ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အဏုမြူဓါတ်ပေါင်းဖို တခုတည်ဆောက် မည်ဟု ကြေညာထားသောကြောင့်လည်း ဒေသခံပြည်သူများက ပို၍ သံသယကြီးထွားနေကြပါသည်။ အီတလီ နိုင်ငံမှ ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် ဒယ်နီရယ်လီ (Danieli) ကလည်း ယခုစီမံကိန်းတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု ယုံကြည်ရပါသည်။
ဆက်သွယ်ရန် ။ ။ ခွန်ချန်ကီ (ဗမာလို) +၆၆ ၈၅ ၂၈၈ ၄၂၁၁ ။ ခွန်ကောဝိန် (အင်္ဂလိပ်လို) +၆၆ ၈၃ ၁၅၂ ၈၀၅၀
အစီရင်ခံစာ အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရှုလိုပါက http://www.paoyouthorganization.blogspot.com တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Secretive Russian Mining Project in Burma set to Destroy Homes of 7,000
Villagers suspect links to Russia-Burma uranium plans
A Russian-backed mining project that plans to excavate an entire mountain southeast of Taunggyi in Burma’s war-torn Shan State will destroy the homes of 7,000 villagers and impactafurther 35,000, according toareport released today.
Robbing the Future, based on exclusive research and photos from the Pa-O Youth Organization (PYO), details the unfolding development of the country’s second largest iron deposit by Burma’s regime and Russian state-owned Tyazhpromexport.
Ongoing construction of an iron processing plant 10 km from the Burma Army’s Eastern Command, nearby an area where recent fighting has flared up, is expected to be completed by the end of the year. The factory is equipped with underground bunkers and surrounded by two ten feet high cement walls and barbed wire.
Fifty five people have already been forcibly relocated out of three villages to make way for the factory and 11,000 acres of farmlands have been confiscated by local authorities. Complaints by the villagers to local government offices were dismissed.
Preparations for the first ofaseries of open pit mines have also begun. These will decimate the mountain, and the homes of 7,000 people living directly around it.
The erosion of mine heaps and the release of tailings into the valley’s main water source, the Thabet Stream, stand to affect 35,000 people downstream. Diversion of the stream to the factory has already led to unusually low water levels this year.
Extreme travel restrictions andalack of public information about the project are fueling rampant local speculation that uranium will also be mined on the mountain.
“They are hiding what they’re doing behind walls and fences, but we will be the ones to suffer the effects of these projects. The foreign companies are taking advantage of the lack of rule of law in Burma to exploit our resources and are robbing our future” said Khun Chan Khe,aspokesperson from the Pa-O Youth Organization.
Local suspicions are heightened byaRussian Atomic Energy Agency announcement in 2007 of plans to buildanuclear reactor in Burma. The Italian company Danieli is also believed to be involved in the project.
Media Contacts: Khun Chan Khe (Burmese) +66 85 288 4211; Khun Ko Wein (English) +66 83 152 8050
View the full report at: http://www.paoyouthorganization.blogspot.com
အရှေ့ ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး လျှပ်စစ်စွမ်းအား ၀န်ကြီးဌာနသို့ ၀န်ကြီးအဖြစ် ပြောင်းရွေ့ သွားခဲ့သူ တစ်ဦးရဲ ဘ၀ကောက်ကြောင်း တစိတ်တဒေသ နဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အတွင်း သတင်းအဖုံဖုံ ကို သျှမ်းသံတော်ဆင့်မှ ကူးယူ ဖော်ပြပြီး စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ နီးစပ်သူများမှ ဖြည့်စွက်ချက်နဲ့အတူ ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ် က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၂၅) …. အချိန်ကာလအားဖြင့် ၁၉၈၃-ခုနှစ်၊ အာဇာနည်ကုန်း ဗုံးကွဲပြီးခါစ အချိန်ဖြစ်သည်။ ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း၊ လွိုင်လင်တပ်နယ်သို့ တပ်ခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ဖြင့် တာဝန်ကျ ပြောင်းရွေ့လာသူ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် တယောက် ရှမ်းပြည်၏ အေးချမ်းသောရာသီဥတုဒဏ်ကို အံကြိတ်ခံစားရင်း လွိုင်လင် တပ်နယ်မှ (၆)မိုင်ဝေးကွာသော ပင်လုံမြို့ ဆီသို့ စက်ဘီးကလေးဖြင့် ထွက်ခွာလာသည်။
“ကမ္ဘာကျော်ပင်လုံစာချုပ်ကို ချုပ်နိုင်ခဲ့လို့ ဖေဖေတို့ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာကွ… ပင်လုံစာချုပ်ကိုသာ မချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဗမာပြည် ဘယ်လွတ်လပ်ရေးရနိုင်မလဲ၊ တောင်တန်း ဒေသတွေနဲ့ တစည်းတလုံးတည်း လွတ်လပ်ရေး ရဖို့မလွယ်ဘူး သားရေ.. ခုငါ့သား.. ပြောင်းရွေ့တာဝန်ကျတဲ့ လွိုင်လင်ဆိုတာ ပင်လုံနဲ့နီးနီးလေးဘဲ၊ ရောက်ရင်တော့ ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို ရောက်အောင်သွားပါ” ဖခင်ဖြစ်သူ အငြိမ်းစား ကျောင်းဆရာကြီး မှာကြားလိုက်သော စကားများကို ပြန်လည်ကြားယောင်မိရင်း မိဘများရှိရာ ပျဉ်းမနားမြို့ကို ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် သတိရနေမိသည်။ ခြောက်မိုင်ခရီးကို စက်ဘီးဖြင့် နင်းရသည်မှာ ပင်ပမ်းမှုမရှိသော်လည်း ဤဒေသတွင် ကြီးစိုးနေသော ရှမ်းသူပုန်များနှင့် ပအိုဝ့်သူပုန်များ အကြောင်းကို တွေးမိရင်းနဖူးပြင်မှာ ချွေးသီးလေးများ စို့တက်လာသည်။ ဒါကြောင့်လည်း တပ်ရင်းက ထွက်ကတည်းက အရပ်သားဝတ်စုံကို ဆင်မြန်း ပြီးထွက်ခဲ့ရသည်။
ဤဒေသအဖို့ သတိဆိုသည်မှာ အချိန်ပြည့်ရှိမှ သင့်တော်ရာ ရောက်သည်။ တောင်ဘက်တွင် ပအိုဝ့်နီသူပုန် (ခေါ်) ရ-လ-လ-ဖ နှင့် မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ရှမ်းသူပုန်များက ဝန်းရံထားသည်။ ယခင်ကာလများက စစ်ဗျူဟာမှူး မောင်အေး (နောင်အခါ နအဖ ဒု-ဥက္ကဌ) ၏စစ်ကြောင်းကို ပအိုဝ်နီခေါင်းဆောင် စောတာကလယ် ကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်သဖြင့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်း လေးပိုင်းပြတ်ကာ အရေးနိမ့်ခဲ့ရဖူးသည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာက တပ်မ (၅၅) ဒုတပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး တင်ဦး (နောင်အခါ နဝတအတွင်းရေးမှူး(၂)နှင့် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တွင် သေဆုံးခဲ့သူ) ၏ စစ်ကြောင်းကိုလည်း ရှမ်းခေါင်းဆောင် စဝ်ဆေထင် ကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်သဖြင့် မရှုမလှ အရေးနိမ့်ခဲ့ရသည်။ ဤသင်ခန်းစာများကိုတွေးမိရင်း ပင်လုံမြို့လေးဆီသို့ ဘေးမသီ ရန်မခဘဲ ရောက်ရှိလာသည်။ ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေစရာမလိုပါ မြို့ပြင်ကပင် ထီးထီးမားမား တွေ့မြင်နေရသည်။
ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်ဟာ ပင်လုံရောက်တာနဲ့ ဆာလောင်လှသောကြောင့် ကျောက်တိုင်အနီး ရှမ်းတို့ဟူးကြော် ဆိုင်တွင် ဝမ်းရေးကို ငြိမ်းလိုက်ရသည်။ တစိမ်း ဧည့်သည်မို့လို့လားမသိ ဆိုင်ရှင် ရှမ်းအဖွားကြီးက လူကဲခတ် ကောင်းသည်။ လူပုံစံကို အကဲခတ်ရင်း “နယ်က ဧည့်သည်လား … လာလည်တာနဲ့ တူတယ်” ဟူ၍ မိတ်ဆက် စကားပြောလာသည်။
မိမိကိုယ်ကို ကျောင်းဆရာလို့ လိမ်ပြောလိုက်ရသော်လည်း တကယ်ဖြစ်ချင်တာက ကျောင်းဆရာပါ။ ဖခင်ဖြစ်သူ ကျောင်းဆရာကိုယ်တိုင် “ငါ့လို ကျောင်းဆရာ လုပ်မယ် စိတ်မကူးနဲ့ မင်းစစ်တပ်ထဲဘဲ သွားရမယ်” ဆိုပြီး စစ်တပ်ထဲအတင်း သွတ်သွင်းခဲ့သောကြောင့်သာ စစ်သားဘဝရောက်ခဲ့ရသည်။ ဗိုလ်သင်တန်း ကာလ များတွင်လည်း မြန်မာစာဆရာကြီးသား ပီပီ ရေသည်ပြဇာတ်ကို မင်းသားသဖွယ် ကပြဖျော်ဖြေ တင်ဆက်သောကြောင့် ဗိုလ်လောင်းများကြားတွင် ရေသည်ခင်မောင်မြင့် ဟုပင် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သည်။ ရဲမြင့်၊ ခင်ဇော်၊ မင်းအောင်လှိုင်နှင့် သာအေးတို့က မိမိရေသည်ပြဇာတ် ကပြဖျော်ဖြေတိုင်း ဘေးမှနေ၍ ပါးစပ်ဆိုင်းတီး၍ ကူညီပေးခဲ့တာကို ယနေ့တိုင် မေ့မရနိုင်ပါ။
“ဒီကျောက်တိုင်က တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ သစ္စာဓိဌာန်ပြုခဲ့တဲ့ ကျောက်တိုင်ကွဲ့၊ ဆရာ…ကျောက်တိုင် နားရောက်ရင် ကျောက်တိုင်ကို သုံးပါတ်ပတ်ပြီး လိုရာဆုတောင်း … တကယ် ဆုတောင်းပြည့်တယ်” ဟု တို့ဟူးကြော်ဆိုင်မှ ရှမ်းအဖွားကြီးက မှာကြားလိုက်သောကြောင့် ပင်လုံကျောက်တိုင် ကို သုံးပါတ်ပတ်ပြီး ဆုတောင်းအဓိဌာန်ပြု လိုက်ပါတော့သည်။
“ငါသည် တနေ့တချိန် ဤရှမ်းပြည်ကို တာဝန်ကျ ပြောင်းရွေ့လာပါက ရှမ်းပြည်၏ အမြင့်ဆုံး တိုင်းမင်းကြီး အဆင့်ဖြင့် ပြောင်းရွေ့ရပါလို၏…” ဟု ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
ပင်လုံကျောက်တိုင် အဓိဌာန်သူ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် အနေနဲ့ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့ပါသည်။ ၂ဝဝ၁-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် (ရ-ပ-ခ)၏ တိုင်းမှူးအဖြစ် ပြောင်းရွေ့ ခန့်အပ် ခံရပါတော့သည်။ မိမိရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်မောင်ဘိုကတော့ ကျေးသီး-မိုင်းကိုင်လမ်းတွင် ချောင်းမြောင်း လုပ်ကြံပစ်ခတ်ခံမှု ဖြစ်ခဲ့ပြီး အသက်ဘေးမှ သီသီကလေး လွတ်မြောက်သွားကာ သေကံမရောက် သက်မပျောက်၍ စစ်တိုင်းမှူးကြီးရာထူးဖြင့် မွန်-ကရင်- တနသာင်္ရီသို့ လစ်သွားလေတော့သည်။
တိုင်းမှူးရာထူးလက်ခံရကတည်းက မိမိဆုတောင်းအဓိဌာန်ပြုခဲ့သော ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို မျှော်မှန်း၍ လွမ်းဆွတ် ဝမ်းသာနေမိသည်။
ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို ယုံကြည်မြတ်နိုးခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်ဟာ တိုင်းမှူးဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက် ပင်လုံကို သွားရောက်ခဲ့ရပါပြီ။
ပအိုဝ်ဂုရုကြီး မဟာအောင်ခမ်းထီနှင့် ပတ္တမြားနဂါးဒါရိုက်တာ နေဝင်းထွန်းတို့ အမည်ခံပြီးလှူဒါန်းသော ဘုရားပန္နက် ချပွဲရှိရာ ပင်လုံမြို့သို့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ကောင်းကင်ခရီးဖြင့် ကြွလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဈာန်ဖြင့်ကြွလာခြင်း မဟုတ်ဘဲ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ် ခင်မောင်မြင့်ကတော့ ကြိုဆိုရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ကားဖြင့်ပင်လုံသို့ဦးစွာ ရောက်ရှိနေသည်။ ဘုရားကုန်းပေါ်မှနေ၍ လှမ်းမြင်နေရသော ပင်လုံ ကျောက်တိုင်ကို သွားချင်ပေမဲ့ ကြိုဆိုရေးတွင် အဘက် ဘက်မှမလစ်ဟင်းရအောင် စီမံကွပ်ကဲနေရသည်။ လစ်ဟင်း၍လည်းမရပါ၊ ဗိုလ်မောင်အေးဆိုသူက လူသာရှည်သည် စိတ်က မရှည်တတ်ပါ။ ၁၉၉၉-ခုနှစ်၊ ညောင်ရွှေပွဲတော်တွင် ဗိုလ်မောင်ဘို တာဝန်လစ်ဟင်းမိသောကြောင့် ဗိုလ်မောင်အေး၏ အဆူအဆဲ ခံလိုက်ရသည့် သင်ခန်းစာ (ဖေါ်ပြခဲ့ပြီး) ကိုသိရှိထားပြီမို့ ပင်လုံတွင်လည်းတာဝန်မလစ်ဟင်းရအောင် ဂရုစိုက်နေရသည်။ အားလုံးအဆင်ပြေ ချောမွေ့ခဲ့ပါသည်။
ဘုရားပန္နက်ချပြီး ဒေသခံ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ ထမင်းစားသောက်ကြသည်။ ဗိုလ်မောင်အေး၏ ထမင်းဝိုင်းတွင် ငြိမ်းခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသော ရလလဖ-ဥက္ကဌ-စောတာကလယ်နှင့် ပအိုဝ်ဂုရုကြီး ဦးအောင်ခမ်းထီတို့ ဝိုင်းဖွဲ့မိကြ သည်။ ထမင်းမသုံးဆောင်မီ ဆုတောင်းကြပါဟု ဆော်သြသောအခါ ဘုန်းကြီး လူထွက် ဦးအောင်ခမ်းထီကတော့ ဂါထာများကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်လေသည်။ စောတာကလယ်ကို ဆုတောင်း ပေးရန် တိုက်တွန်းသောအခါ စောတာကလယ် ဆုတောင်းချက်ကြောင့် အားလုံးသောပါးစပ်များ ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားကြသည်။
“ခင်ဗျားတို့နဲ့ ကျနော်တို့ …နောင်အခါ ရန်မဖြစ်မိပါစေနဲ့ဗျာ”
စောတာကလယ် ဆုတောင်းချက်ကြောင့် ဗိုလ်မောင်အေး အံ့အားသင့်သွားသလို တချိန်ကမိမိ စစ်ကြောင်းကို နမ့်စန် နှင့်လွိုင်လင်ကြား လေးပိုင်းပြတ်အောင် ချေမှုန်းခဲ့သော သူဖြစ်နေသောကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ် ရောက်သည်ထိ ဒေါသထွက် မျက်နှာကြီးနီနေလေတော့သည်။
၂ဝဝ၃-ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၉)ရက် ပင်လုံဘုရားထီးတော်တင်လှူပွဲ
ဗိုလ်မောင်အေး ပန္နက်ချခဲ့သော ဘုရားကိုထီးတော်တင်လှူရန် ဗိုလ်ခင်ညွှန့် ခေါင်းဆောင်၍ ပင်လုံသို့ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ချီတက်လာသည်။ အလှူရှင်အမည်ခံ ဂုရုအောင်ခမ်းထီနှင့် ပတ္တမြားနဂါးဒါရိုက်တာ နေဝင်းထွန်းတို့ကလည်း ခေါင်းပေါင်း တလူလူဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ရဟတ်ယာဉ် ဆင်းသက်လာသောအခါ တိုင်းမှူးအနေဖြင့် ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်က ဦးစွာကြိုဆိုရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဂုရုအောင်ခမ်းထီကဦးစွာပြေးသွား၍ ဖက်လှဲတကင်း လောကွပ်ပြုနေသည်။ တရားနားချိန်မှာလည်း နှစ်ကိုယ် ကြားပြောလိုက်တဲ့စကား … ထမင်းစားချိန်မှာလည်း တတွတ်တွတ် ပြောလိုက်တဲ့စကား….. ကြာလာတော့လည်း ဗိုလ်ခင်ညွှန့် နားပူလာပြီး ဂုရု အောင်ခမ်းထီကို စိတ်ပျက်လာပုံရသည်။
ဆရာတော်ကြီးကို သင်္ကန်းကပ်လှူနေတဲ့ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်
“ကဲပါ ဦးအောင်ခမ်းထီရယ်…. ကျနော်ကအဝေးကလူပါ၊ ဦးအောင်ခမ်းထီက အနီးကလူကို မေ့နေတယ်ထင်တယ်။ ဦးအောင်ခမ်းထီကို အနီးက လူက ပိုပြီး ကူညီမှာနော်…” ဟူ၍ တိုင်းမှူး ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် ဘက်ကိုမေးငေါ့ပြီး ညွှန်ပြသောအခါ ပင်ကိုယ်နီနေသော ဂုရုအောင်ခမ်းထီမျက်နှာသည် ဆေးနီသုတ်လိမ်း ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သွားလေတော့သည်။
ရဟတ်ယာဉ်များ ပျံတက်သွားပြီးနောက် တိုင်းမှူး၏ ကားပေါ်မှာပါလာသော လွိုင်ကော် ကျောက်ပြားစက်ရုံထုတ် အခင်းကျောက်ပြားချပ်များကို ပင်လုံ ကျောက်တိုင် ခြေရင်းရှိ ယိုယွင်းကွဲအက်နေသော နေရာများ၌ ပြုပြင်လိုက်လေသည်။
မိမိ ဆုတောင်း အဓိဌာန်ပြုခဲ့သော ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို အားပါးတရ ရှုမျှော်ရင်း ကျောက်တိုင်အနီး တို့ဟူးကြော်ဆိုင်ရှင် ရှမ်းအဖွားကြီးကို မျက်စိ ရှာဖွေမိတော့သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂ဝ)ကျော်က ရှမ်းအဖွားကြီး လမ်းညွှန်ခဲ့လို့ အဓိဌာန်ပြုခဲ့တာ ယခုဆုတောင်းပြည့်ပြီး တိုင်းမင်းကြီး အဆင့်ဖြင့် ရှမ်းပြည်၏ အမြင့်ဆုံးရာထူးကို ရရှိခဲ့သည်။ ဆက်လက်၍လည်း တပ်မတော်၏ အမြင့်ဆုံးသောအဆင့်ကို ရရှိဖို့ ထပ်မံ၍ ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို အဓိဌာန် ပြုမိပြန်သည်။ ကျောက်တိုင်ကို သုံးပါတ် မပတ်မိခဲ့ချေ။
တိုင်းမှူးခင်မောင်မြင့် ပင်လုံမှ မထွက်ခွာသေးသော်လည်း အမှတ် (၂)ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူး-မင်းလွင်ဆိုသူက ပင်လုံ ကျောက်တိုင်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံနေသည့် သတင်းအား ရန်ကုန်ရှိ ကက-လှမ်းနှင့် ကက-ကြည်းတို့ကို တိုင်ကြားစာ အစီရင်ခံသတင်းပို့ပြီးဖြစ်လေတော့သည်။
ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့၏ သဘာပတိအဖြစ် ဖိတ်ကြားလွှာ
ထို့နောက် (၅၈)နှစ်မြောက်၊ ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့တွင် သဘာပတိအနေဖြင့် တက်ရောက်ရန် ဖိတ်စာနှင့်တကွ ရှမ်းတိုင်းရင်း သားဝတ်စုံကို အက်စ်ဘီအရာရှိ ရဲလှမောင်က ယူဆောင်လာပြီး တိုင်းမှူးခင်မောင်မြင့်ကို ပေးအပ်ကာ အစီရင်ခံခဲ့သည်။
ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း သာမက မြောက်ပိုင်းမှ ရှမ်းခေါင်းဆောင်များပါ တက်ရောက်မည့်ပွဲတွင် တိုင်းမှူးအား သဘာပတိအနေဖြင့် တက်ရောက်ချီးမြှင့်ရန် တောင်ကြီးမြို့မှ မျိုးဆက်သစ်-ရှမ်းပြည်အဖွဲ့နှင့် လွတ်လပ်ရေး မော်ကွန်းဝင် ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေး သမားဟောင်းများ ကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး ဖိတ်ကြားထားသောကြောင့် တက်ရောက်မည်ဟု နှုတ်ဂတိကို ရဲလှမောင်မှတဆင့် ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်က ပြန်ကြားလိုက်ပါသည်။
၂ဝဝ၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၃)ရက်၊ မွန်းလွဲ (၂)နာရီတိတိတွင် အက်စ်ဘီရဲလှမောင် တစ်ယောက် တိုင်းမှူး၏ နှုတ်ဂတိကို မျိုးဆက်သစ်-ရှမ်းပြည်အဖွဲ့ထံ လာရောက်ရှင်းပြသည်။ ယခု ပြုလုပ်မည့်ပွဲသည် တရားဝင်ခွင့်ပြုထားကြောင်း၊ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ရှိပါက ကြိုတင်၍ ပေးပို့ထား စေလိုကြောင်း၊ စိုးရိမ်စရာမလိုကြောင်း၊ အကယ်၍ အထက်မှ နှောက်ယှက်တားဆီးမှုများ လုပ်ခဲ့ပါက မိမိ၏ ပုခုံးထက်မှ နှစ်ပွင့်ပြုတ်ချင်ပြုတ်သွားပါစေ အာမခံကြောင်း တောင်ကြီးအက်စ်ဘီအရာရှိ ရဲလှမောင်က ရှမ်း ခေါင်းဆောင်များ ရှေ့မှောက် ဝန်ခံဂတိပြုခဲ့ပါသည်။ (တကယ်တမ်း ရှမ်းအတိုင်ပင်ခံ ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များကို ဖမ်းဆီးပြီးသောအခါ နှစ်ပွင့်ပြုတ်ပြီး သုံးပွင့်ပိုင်ရှင် ရဲလှမောင် ဖြစ်သွားလေသည်)
လွိုင်လင်မြို့၏ အရှေ့ဘက်ကုန်းပေါ်ရှိ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ကို ၂ဝဝ၂-ခုနှစ်တွင် တည်ထားပါသည်။ နအဖခေတ်တွင် ဖောင်းပွသော တပ်ရင်းအသစ်များ တည်ထောင်သောအခါ မူလတပ်ရင်းများမှ တပ်စုတစ်စုစီ တောင်းခံပြီး တပ်ရင်း တစ်ခုဖြစ်အောင် ဖြည့်တင်းလေသည်။ ရှိရင်းစွဲတပ်ရင်းမှူးကလည်း တပ်စုတစ်စုကို ပေးရာတွင် အဆိုးဆုံး၊ အမိုက်ရိုင်းဆုံး၊ စာရိတ္တပျက်ပြားသူများကို စုဆောင်းပြီး တပ်စုတစ်စု ဖြစ်အောင် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တပ်ရင်းအသစ်များတွင် ပြဿနာပေါင်း မြောက်မြားစွာ ကြုံတွေ့နေရသည်။ ယခုလည်း တိုင်းမှူးခင်မောင်မြင့် လက်ထက်တွင် မောက်မယ်မြို့မှ တပ်ရင်း အသစ် (ခ-မ-ရ-၂၃၁-) တွင် တပ်ပြေးမှုကြီး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
လက်နက်ကြီးငယ် ကိုင်ဆောင်ပြီး တပ်သား (၁၂)ယောက် တောခိုသွားခဲ့သည်။ တဖန် လွိုင်လင်မြို့ပေါ်ရှိ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်တွင် တပ်တွင်း အချုပ်ကျနေသော တပ်သားများက အချုပ်ကိုဖောက်ကာ လက်နက်တိုက်ကို ဝင်စီးခဲ့သည်။ ယင်းနောက် တပ်ရင်းမှူး၏ မာစတာဂျစ်ကားကို ဝင်လုသည်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တပ်ရင်းမှ မထွက်ခွာမှီ နောက်ဆုံးတွင် ဆက်သွယ်ရေးစက်များကိုပါ သယ်ဆောင်သွားသည်။ ဆက်သွယ်ရေးစက်များကို စောင့်ကြပ်နေသော တပ်ကြပ်ကြီးက စက်များကို ယူဆောင်ပါက မိမိ၏ ကာဘိုင်သေနတ်နှင့် မိမိအား ပစ်သတ်သွားပါဟု တောင်းပန်သောအခါ တပ်ပြေးရဲဘော်များ စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားရသည်။
ဦးအောင်ခမ်းထီ၊ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်၊ စောတာကလယ်နဲ့ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်တို့အား အတူတကွ တွေ့ရစဉ်
ဆရာရင်းလည်း ဖြစ်နေသောကြောင့် တောခို တပ်သားများသည် နောက်ဆုံးတွင် ကာဘိုင် သေနတ်နှင့် တပ်ကြပ်ကြီးကို ကြိုးဖြင့် တုတ်နှောင်လိုက်ကြပြီး ရှိခိုးဦးချ ထွက်ခွာသွားလေတော့သည်။ ရဲဘော်အင်အား (၁၄) ယောက်၊ လက်နက်တိုက်မှ အကောင်းဆုံးလက်နက်များ၊ တပ်ရင်းမှူး၏ကား၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်များနှင့် တောခိုသွားသော နေ့သည် ၂ဝဝ၅-ဖေဖော်ဝါရီလ (၄)ရက်နေ့ည ဖြစ်သည်။ ၂ဝဝ၅-ခုနှစ်၏ အကြီးမားဆုံး တပ်တွင်းပုန်ကန် ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်သွားလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့်လည်း တိုင်းမှူးခင်မောင်မြင့်သည် မိမိ၏ ငယ်ထိပ်ကို မြွေပွေး ပေါက်သလို ခံစားရပြီး အလျင်အမြန် သွားရောက် စစ်ဆေးရလေသည်။
ဤသို့ တပ်တွင်းပုန်ကန်မှု ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းအပေါ် သွားရောက် ဖြေရှင်းနေရ၍ ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် အနေဖြင့် မိမိနှုတ်ဂတိပေးခဲ့သော ရှမ်းပြည်ခေါင်းဆောင်များအား မိမိအနေဖြင့် အခမ်းအနားသို့ မတက်ရောက်နိုင်တော့ခြင်းအပေါ် များစွာစိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါကြောင်း အက်စ်ဘီရဲလှမောင် မှတဆင့် တောင်းပန်စကား ပါးလိုက်ရလေသည်။
အကြီးမားဆုံး တပ်တွင်းပုန်ကန်ထွက်ပြေးမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လွိုင်လင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးတပ်ကိုလည်း အသေးစိတ် စစ်ဆေးပြီး အထက်ကို အစီရင်ခံ တင်ပြနေရသည်။ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး အဓိပတိဖြစ်သူ ဗိုလ်စိုးဝင်းကလည်း အချိန်ပြည့် ဆူပူကြိမ်းမောင်းနေသောကြောင့် ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်သည် မိမိသွားချင်လှသော ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို အဝေးမှသာ လှမ်း၍ ငေးကြည့် ခဲ့ရလေတော့သည်။
ထို့နောက် ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်ကို ရပခ တိုင်းမှူးမှ နပခ တိုင်းမှူးအဖြစ် ပြောင်းရွေ့ကာ ခန့်ထားလိုက်ပါတော့သည်။ ရာထူးမတိုးဘဲ တိုင်းမှူးအဆင့်နဲ့သာ ရခိုင်ပြည်သို့ ပို့လိုက်သည်မှာ စစ်တပ်လောကအဖို့ ရာထူးချသူများကို ဒါဏ်ပေးခြင်း တစ်မျိုးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ရ-ပ-ခ စစ်တိုင်းမှူးဘဝသည် လွန်စွာ လာဘ်ရွှင်သည်။ ငြိမ်းအဖွဲ့များ ပေါများသောကြောင့်လည်း အမြဲတမ်းလိုလို လာဘ်ပူဇော်ခံရသည်။ ယခုရခိုင်ပြည် န-ပ-ခ သည် ရှမ်းပြည်ထက် လာဘ်ပူဇော်ခံရမှု နည်းပါးသည်။ ဖြစ်ကြောင်း စုံလင် ရင်ဖွင့်ရမည် ဆိုပါက ရ-ပ-ခ စစ်တိုင်းမှ တိုင်းမှူးတိုင်း လိုလိုသည် တဆင့်မြင့်၍ ရာထူးတက်သွားကြသည့် ထုံးစံမြင်ခဲ့ရသည်။
ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် လက်ထက်ကျမှ တစ်နိုင်ငံလုံးတွင် စစ်ပြေးအများဆုံးပြစ်မှု၊ ငြိမ်းအဖွဲ့များအပေါ် သဘောထားပျော့ပြောင်းမှု (ဥပမာ -ရလလဖ- အဖွဲ့တွင်း ဥက္ကဌဟောင်း စောတာကလယ်နှင့် ဘိန်းရာဇာ ခွန်ချစ်မေါင်တို့ကြား ပြဿနာကို ကိုင်တွယ်ရာတွင် တရားချ၍ စေ့စပ်ပေးခြင်း)၊ ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့တွင် သဘာပတိအဖြစ် တက်ရောက်ရန် လက်ခံလိုက်ခြင်း (အက်စ်ဘီရဲလှမောင်၏ အစီရင်ခံတိုင်ချက်)နှင့် အဆိုးဆုံးပြစ်မှုဖြစ်သည့် သမိုင်းဝင် ပင်လုံကျောက်တိုင်ကို ကြွေပြားခင်း ပြုပြင်ခြင်း (ထောက်လှမ်းရေးတပ်မှူး-မင်းလွင်၏ တိုင်တန်းချက်) တို့ကြောင့် ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်မှာ စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့က ရာထူးချသည့် အနေဖြင့် ရခိုင်သို့ တစ်နှစ်ကျော် ပို့ခြင်းခံလိုက်ရလေသည်။
ရခိုင်ပြည်တွင် တိုင်းမှူးဘ၀နဲ့ နေစဉ်အတွင်း တိုက်ဆိုင်မှုက ထပ်မံကြုံရပြန်သည်။ မိမိအား ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားသို့ သဘာပတိလုပ်ရန် အဓိကဖိတ်ကြားလိုက်သော မျိုးဆက်သစ်-ရှမ်းပြည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဦးမြင့်သန်းနှင့် ရခိုင်ပြည်တွင် ရေစက်ဆုံရပြန်သည်။ ၂ဝဝ၅-ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ၅၈-နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်အမျိုးသားနေ့ ကျင်းပဖို့ရန် တရားဝင် ခွင့်တောင်းခံလာသောကြောင့် တိုင်းမှူးအနေဖြင့် ခွင့်ပြုလိုက်သည့်အပြင် သဘာပတိ လုပ်ဖို့ရန်လည်း လက်ခံခဲ့မိပါသည်။ မိမိအား အကြီးအကျယ် ဒုက္ခပေးခဲ့သော လွိုင်လင် တပ်ပြေးကိစ္စကို သွားရောက်စစ်ဆေးနေခိုက် အခမ်းအနား တက်ရောက်သူတိုင်းကို ရန်ကုန်အာဏာပိုင်များ ကိုယ်တိုင် လာရောက်ဖမ်းဆီးကြလေသည်။ တစုံတရာ မှားယွင်းခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ အခမ်းအနား ထုတ်ပြန် ကြေညာချက်များကိုလည်း ဖေဖော်ဝါရီ (၅)ရက်ကတည်းက ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော်ကို အကြည်အညို ပျက်စေသော အသုံးအနှုန်းတစ်ခုမှ မပါဝင်ပါ။ ညစာစားပွဲမှတ်တမ်းကိုလည်း ရန်ကုန်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဆိုသူ မောင်အေးလွင်နှင့် ဦးဇင်အောင်တို့က မှတ်တမ်းတင် ပေးပို့ထားသောကြောင့် ဗီဒီယိုခွေကို ကြည့်ရှုသောအခါတွင်လည်း ပြောဆိုသော စကားများသည် နိုင်ငံတော်ကို အကြည်ညိုပျက်စေသော စကားများ လုံးဝမတွေ့ရပါ။ အဓိပ္ပါယ်ကားရှင်းပါသည်။ မျိုးချစ်ရှမ်းပြည်နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ညီညွတ်ခြင်းကို စစ်ကောင်စီအနေဖြင့် ကြောက်လန့်သွားခြင်းနှင့် ညောင်နှစ်ပင်ကို ဆန့်ကျင် ထွက်လာသော ခွန်ထွန်းဦးပါတီကို ရိုက်ချိုးချင်သောကြောင့် တပ်ချုပ်ကြီးနှင့် ဗိုလ်ရွှေမန်းတို့ ကိုယ်တိုင် အမိန့်ပေး ဖမ်းခိုင်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဦးခွန်ထွန်းဦး အပါအ၀င် ရှမ်းခေါင်းဆောင် (၈)ယောက်ကို စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ် နှစ်ပေါင်း (၆၉၇)နှစ် ချမှတ်လိုက်ပြီး ယင်းတို့ထဲမှ ဦးမြင့်သန်းသည် သံတွဲထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂ဝဝ၆-ခုနှစ်၊ မေလဆန်းပိုင်းတွင် မာလာမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်၍ ရခိုင်ပြည်ရှိ ကျောက်ဖြူနှင့် သံတွဲဒေသမှာ မုန်တိုင်းဒါဏ်ကို အနည်းငယ် ခံလိုက်ရသည်။ ထိုအချိန်တွင် မုန်တိုင်းဒါဏ်ခံရသည့် သံတွဲမြို့ကို ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့် စစ်ဆေးနေခိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အသုဘကို ရဲများ တင်းကြပ်သည့် ကြားမှပင် သံတွဲပြည်သူလူထု အများအပြား လိုက်လံပို့ဆောင်ကြ၍ စည်ကားနေသည့် သတင်းဝင်လာသည်။ ထူးဆန်းသော အသုဘကို စုံစမ်းခိုင်းလိုက်ရာ သေဆုံးသူမှာ ရှမ်းပြည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားနှင့် မိမိအား ရှမ်းပြည် အမျိုးသားနေ့တွင် သဘာပတိအဖြစ် ဖိတ်စာကမ်းလှမ်းခဲ့သော ဦးမြင့်သန်း ဖြစ်နေလေသည်။ ထုို့ကြောင့်လည်း ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်သည် အသုဘ ပို့ဆောင်သူများကို အတင်းအကြပ် တားဆီးခြင်းမပြုရန် ကိုယ်ရေးအရာရှိမှတဆင့် အမိန့်ပေးလိုက် လေတော့သည်။
ထိုမှတဆင့် ၂ဝဝ၆-ဇွန်လတွင် နပခ စစ်တိုင်းမှူးဘဝမှ ရာထူးလျောကျကာ အမှတ် (၂)လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ရာထူးဖြင့် လျှပ်စစ်မီး ထိန်ထိန်လင်းနိုင်ရေးအတွက် ဓါတ်တိုင်များကို ဝန်ကြီး ဗိုလ်ခင်မောင်မြင့်သည် အချိန်ပြည့် စစ်ဆေးနေ ရတော့သည်။ နေပြည်တော်ရှိ တပ်မတော်နေ့စစ်ရေးပြပွဲတွင် ဗိုလ်လောင်းဘဝကာလ ရေသည်ပြဇာတ်ကို ကပြစဉ်က ပါးစပ်ဆိုင်းတီး၍ ကူညီခဲ့ကြသော ငယ်ပေါင်းများဖြစ်သည့် ရဲမြင့်၊ ခင်ဇော်၊ မင်းအောင်လှိုင်နှင့်သာအေးတို့ကို တတိယ အထူးတန်း ခုံနေရာများတွင် တွေ့နေရသည်။ ရေသည်ဇာတ်ကောင် ခင်မောင်မြင့် တစ်ယောက် အပြင်မှနေ၍ လျှပ်စစ်မီးများအချိန်ပြည့်လင်းနိုင်ရေးအတွက် အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ အခမ်းအနားပြီးသောအခါ ငယ်သူငယ်ချင်းများက စိတ်မကောင်းသောမျက်နှာဖြင့် ကြည့်ရှုသောအခါ လွန်စွာ ခံရခက် နေရပါသည်။
ပြင်ဦးလွင်ခေါ် မေမြို့သည် ထူးထူးခြားခြား မီးထိန်ထိန်လင်းနေသည်မှာ သုံးရက်ပြည့်နေပြီ ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းဆင်းပွဲကို တပ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်သောကြောင့် မီးများလင်းနိုင်ဖို့ ဝန်ကြီး ခင်မောင်မြင့်၏ စွမ်းဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းဆင်း ညစာစားပွဲတွင်လည်း လျှပ်စစ်မီးများ ထိန်ထိန်ညီးအောင် ထွန်းထားပေးသော ဝန်ကြီး ခင်မောင်မြင့်ကို ငယ်သူငယ်ချင်းများက ချီးကျူးနေကြသည်။ ၄င်းချီးကျူးသံများကို တပ်ချုပ်ကြီး ကြားသိသောအခါ စိတ်ဆိုးသည့်ဟန်ဖြင့် “ဘာမဟုတ်တဲ့ ပင်လုံ ကျောက်တိုင်ကို… ကိုးကွယ်ချင်တဲ့ကောင်၊ ဒါကြောင့် ဓါတ်တိုင်ရာထူးပေးထားတာ ဘယ်နေ့ဓါတ်လိုက် သေမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပေါ့ကွာ၊ အဲ့ဒါမင်းတို့လည်း သင်ခန်းစာယူထားကြ” ဟု စစ်တိုင်းမှူးကြီး များကို သြဝါဒ ပေးလိုက်လေသည်။
ရွှေမန်းမြေခေါ် မန္တလေးမြို့သည် လျှပ်စစ်မီးများ ကွက်တိကွက်ကျားလင်းနေသည်မှာ သုံးရက်ရှိပြီ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ပြင်ဦးလွင်ဓါတ်အားလိုင်းထဲသို့ လျှပ်စစ်အားများ ဖြည့်တင်းနေသောကြောင့် အလှည့်ကျ မီးဖြတ်စနစ်ဖြင့် မန္တလေးကို အမှောင်ချနေသော ဝန်ကြီးခင်မောင်မြင့်လက်ချက်ဖြစ်သည်။ မီးမှောင်အောက်မှ အချို့သောအပျော်ကျူး ရွှင်မြူးနေသော သူများကိုမြင်ယောင်နေသော လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ခင်မောင်မြင့်တယောက် တကိုယ်တည်း သက်ပြင်းချ ညီးငြူမိတာက “အော်… အဖေဖြစ်တဲ့ တပ်ချုပ်ကြီးခမျာ မီးရောင်အောက်က ထမင်းစားပွဲမှာ အားပါးတရ စားသောက်နေတဲ့အချိန် …သမီးတော်လေးတွေက မီးမှောင်အောက်မှာ တရုတ်ပေါက်ဖော်လေးတွေနဲ့ ဒူးတိုက် သံစဉ်လှိုင်း….ခံစားနေကြတာကို တပ်ချုပ်ကြီး တယောက် မသိရှာလေဘူး….” ဟူသတည်း။
မှတ်ချက်။ ။ ဤစောင်းပါးကို ကိုဖိုးတရုတ် စာမျက်နှာမှ ပြန်လည်ကူးယူ ဖေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၆၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၁)ရက်နေ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေး၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးသိမ်း ဦးဆောင်သော တိုင်းရင်းသား စာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီကို ရန်ကုန်တက္ကသိုက်တွင် စတင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ဤကော်မတီ၏ လက်အောက်တွင် ဆပ်ကော်မတီအသီးသီးဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ သည်။ ၎င်းတို့မှာ-
တောင်ကြီးမြို့တော်သည် အင်္ဂလိပ်မ၀င်လာခင်နှင့် မြို့မတည်ခင်အချိန် ကတည်းက ဒုံတောင်းတီဆိုသော ပအိုဝ်းရွာတစ်ရွာရှိခဲ့သည်။ ထိုရွာဦး ဘုန်းကြီးကျောင်းသည် မွဉ်ခြဲုင် ကျောင်းဖြစ်သည်။ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၇၄၇ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တါင် တောင်ကြီးမြို့တကျောလုံးတွင် မွဉ်ခြဲုင်ဘုန်းကြီး ကျောင်းတစ်ကျောင်းသာ ရှိခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖက်ဆစ်ဂျပန် များဝင်လာသောအခါ ထိုမွဉ်ခြဲုင်ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဗုံးကြဲခြင်းခံရပြီး ပျက်စီးသွားခဲ့သည်။ ဂျပန်ခေတ် အတွင်း မွဉ်ခြဲုင်ဘုန်းကြီးရှစ်ပါးမြောက်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဦးနရိန္ဒသည် အောက်မြန်မာပြည် သထုံ ဘက်ဇာတိဖြစ်သည်။
အရင်းရှင်စနစ်မတိုင်မှီ ရောမခေတ် ကုန်ခါနီး အေဒီ(၆)ရာစုမှစ၍ ဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင် လှည့်လည်နေထိုင်ကြသော ဟန်လူမျိုးများ၊ ကျူတန်လူမျိုးများသည် ရောမအင်ပါယာကို မကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ အလယ်ခေတ်တွင်ကား ကျူတန်လူမျိုးတို့၏ ဒေသန္တရအလိုက် နယ်ပယ်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်လာသော နည်းစနစ်လွမ်းမိုးလာခဲ့လေသည်။